10 wasaaradood ee xukumadda qeyre oo lacagihii laga jartay sabab – XAMAR POST
By Zakariye iiman On Mar 11, 2019
Ugu yaraan 10 wasaaradood oo ka tirsan Xukuumadda Reysal Wasaare Kheyre, xafiisyada taliyaasha Ciidamada iyo xafiisyada Maxkamadaha dalka ayaa laga goostay lacagtii ay qaadan jireen ee socodsiinta shaqada qaranka (running coast).
Sidoo kale waxaan mushaar joogta qaadan muddo 6 bil ah qaar ka mid ah ciidamada Milateriga Soomaaliya, sida Guutada 14 oct iyo Wariyaasha Idaacadda Ciidamada Qalabka Side ee Soomaaliya (Radio SNA) iyo Xafiisyo kale.
Sababta mushaakilkaan lacagta ah ee taagan ayaa lagu sheegay in World Bank uu joojiyay lacagtii caddaanka aheyd ee la siin jiray Dowladda Soomaaliya kadib amar ka yimid QM oo khilaaf culus kala dhaxeeyo Soomaaliya. Sidoo kale, qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka, iyo Midowga Yurub ayaa lacagtoodii hakiyey.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka duulay dhibaatada soo wajahday dowladiisa ayaa dhowaan u safray wadanka Qatar si loo caawiyo dowladiisa basle waxaa la sheegay in la soo siiyay lacag dhan 20 milyan, taas oo la sheegayo in aysan waxba ka galin Soomaaliya markii loo eego caqabadaha ku hor gudban DF.
Dowladda Soomaaliya ayaa hore lacagta uga joojisay Warbaahintii qaadan jirtay laa-luushka, taageerayaasheeda Facebook iyo xafsiiyadii Dowladda waxaana hada lays waydiinayaa waxa xiga ee dhici kara….
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo soo saaray Amar deg deg ah